Sapphire Crystal Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Manohy mitatitra ny toetran'ny tsirairay amin'ireo maodelin'ny Apple Watch ary amin'ity indray mitoraka ity izahay dia mitondra horonantsary mandeha amin'ny Internet ianao, anaovana andrana amin'ny efijery ny maodelin'ireo Navoaka i Apple Watch ho fanampin'ny efijery famantaranandro mahazatra hafa sy ny efijery iPhone.
Ny zava-misy dia ny fanandramana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fitaovana iray izay ny zavatra ataony dia manome antsika ny lanjan'ny hamafin'ny kristaly fa raha tena safira ihany. Ny zavatra ataon'ny fitaovana dia fitsapana fitondra-tena mafana amin'ny tranga fa ny fitaovana notsapaina dia tsy safira tsy hamaky.
Ireo fitaovana izay voamarina ao amin'ilay horonan-tsary ampiarahanay dia famantaranandro elektronika avy amin'ny LG, iPhone 6, famantaranandro Tissot mahazatra, vy iray Apple Watch ary efijery an'ny Apple Watch Sport. Ny zavatra voalohany vita amin'ny horonantsary dia ny fampisehoana ilay fitaovana manao ny refy ary manazava ny fomba fanaovany azy.
Mba hanaovana izany, ny sisa ataonao dia mampifandray azy ary mitazona azy amin'ny ampahany vy. Taty aoriana dia esorina ilay satroka ary ny tendrony metatra dia miraikitra amin'ny efijery fitaovana izay tiantsika ho fantatra raha vita amin'ny kristaly safira izy ary tena sarotra tokoa.
Ny fitsapana voalohany dia natao teo amin'ny efijery amin'ny famantaranandro LG, ny efijery an'ny iPhone ary ny efijery an'ny Apple Watch Sport. Izy rehetra dia manome famakiana mafy tsy misy Ary marina fa ireo fitaovana ireo dia tsy manana efijery safira ka tsy afaka manao ilay fitsapana fitarihana ny fitaovana.
Rehefa manao ny fitsapana eo amin'ny veran'ny famantaranandro Tissot dia hitantsika fa manome famakiana izany ary ambonin'izany ny hamafisana dia mahatratra ambaratonga 7. Aorian'izany, ny fitsapana dia atao amin'ny efijery amin'ny vy Apple Watch ary ny famakiana 8 azo, mba hahafahantsika mamintina izany Apple dia nampiasa fampisehoana kristaly safira tena tsara tamin'ny vy sy Edition Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Eny tokoa, ny Apple Watch dia manana kristaly safira tena matanjaka
Veloma. Mpifandray patanty Apple hampiasa fehy mahazatra amin'ny Apple Watch